सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले अर्काे वर्षदेखि एउटै गुणस्तरका कपडा खरिद गर्ने भएका छन् । समान गुणस्तरमा रङ मात्र फरक पर्ने गरी टेन्डर गर्ने सुरक्षा निकायले तयारी गरेको हो । सुरक्षाकर्मीले पाउने कपडासहित स्केलका सामानको गुणस्तर निर्धारण गर्न नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागका निर्देशकको संयोजकत्वमा एक समिति नै बनेको छ । समितिमा सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्रका
नेकपाको एकता कार्यदल विघटनपछि असन्तुष्ट सदस्यले पार्टी अध्यक्षलाई समानान्तर प्रतिवेदन बुझाएका छन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा दुई घण्टा पर्खिएर आइतबार बेलुकी ९ बजे प्रतिवेदन दिए। ओलीले बेलुका ७ बजेको समय दिएका थिए। तर, उनी उक्त समयमा राष्ट्रपतिसँगको भेटका लागि शीतलनिवास पुगेका थिए। नेताहरू योगेश भट्टराई, वेदुराम भुसाल, लेखराज भट्ट, वर्षमान पुन र सुरेन्द्र पाण्डे असन्तुष्ट
विप्लवलाई फकाउने कि दबाउने ? अलमलमा सरकार !
सरकार आफ्नै रणनीतिका कारण अफ्ठ्यारोमा परेको छ। यही विषयमा छलफल गर्न गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले अधिकारसम्पन्न राजनीतिक वार्ता समितिका संयोजक सोमप्रसाद पाण्ड्येलाई मन्त्रालय बोलाएका छन्। असन्तुष्ट राजनीतिक समूहको नजरबाट आफूमाथि हुनकै लागि सरकारले वार्ता समिति गठन गरेको थियो। तर, वार्ता समितिको बेवास्ता गर्दै नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाले आफ्नो गतिविधि रोकेन। जसको कारण सरकार आफ्नै रणनीतिको
तीनै सरकारबीच समन्वय नहुँदा देशमा समस्या आइरहेको प्रदेश नं. ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले बताएका छन् । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच समन्वय गरेर मात्र जनसरोकारका विषयलाई समाधान गर्न सकिने मुख्यमन्त्री पौडेलले बताए । नुवाकोट र रसुवा भ्रमणमा रहेका मुख्यमन्त्री पौडेलले सोमवार विदुरमा आयोजित अन्तरक्रियामा तीनै सरकारबीच समन्वय नभए गन्तव्यमा पुग्न नसक्ने दाबी गरे ।
कन्स्ट्यान्टिनो जेभियरले हालै जोन्स होप्किन्स विश्वविद्यालयबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पिएचडी लिए । यसपछि उनी एक पुस्तक समेत लेखिरहेका छन् । साथै उनी दक्षिण एसियाली मुलुकबीच सम्बन्ध र सुरक्षाका चुनौतीबारे अनुसन्धान गरिरहेका छन् । दक्षिण एसियाको भूराजनीतिलाई नजिकबाट नियालिरहेका जेभियरसँग अन्नपूर्ण एक्सप्रेसका सम्पादक विश्वास बराल र कमलदेव भट्टराईले भारत- – पाकिस्तानको पछिल्लो राजनीतिक तनाव, एसिया प्यासिफिक राजनीति
कांग्रेसमा प्रवेश गर्न नयाँ शक्तिका सांसद् नै आएनन्, जिल्लिए नेताहरु
नयाँ शक्तिका नेता तथा एकजना प्रदेश सभा सांसद नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गर्ने चर्चा दुई साता अघिदेखि चल्यो । कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहितका नेताको उपस्थितिमा नयाँ शक्तिबाट निर्वाचित प्रदेश सांसद प्रवेश गर्ने भनिएपछि नेताहरु त्यही तयारी अनुसार सोमबार रसुवा पुगे । तर प्रदेश सांसद प्रेम तामाङसहितका करिब ५ हजार नेता कार्यकर्ताहरु कांग्रेसमा प्रवेश गर्ने कुरा तब
सरकार-निजी साझेदारीबाट मात्रै स्तरीय शिक्षा
मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै माध्यमिक तह (कक्षा १२) सम्मको शिक्षाको दायित्व स्थानीय तहको जिम्मामा पुगेको छ। आधारभूत तह (कक्षा ८) सम्मको शिक्षा निःशुल्क तथा अनिवार्य हुने र माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। क्षेत्रगत रूपमा राज्यको सबैभन्दा धेरै लगानी रहेको सार्वजनिक शिक्षाप्रति अभिभावकको विश्वास घटिरहनु र स्तरीय शिक्षा दिएको दाबी गर्दै आएका निजी
राष्ट्रिय परिचयपत्रको गरिमा
राष्ट्रिय परिचयपत्र कसैले पेस गरेको नागरिकताका आधारमा नभई नागरिकताको लगतसित भिडाई यकिन भएपछि मात्र जारी गरिनु उपयुक्त हुन्छ सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विधेयक संसद्मा पेस गरेको छ । विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलका क्रममा रहेको छ । यसका साथसाथै नागरिकता ऐन २०६३ मा आवश्यक संशोधन गर्न भनी अर्को विधेयक पनि संसद्को उही समितिमा विचाराधीन
भ्रष्टाचारलाई संसारका प्रायः कानुनी प्रणालीहरूले अनैतिक, आर्थिक र सामाजिक अपराधका रूपमा लिने गरेका छन्। भ्रष्टाचार हरेक मुलुकमा हुन्छ, विकसित होस् वा अविकसित होस्, गरिब होस् वा धनी होस्। यस्तो अपराध नियन्त्रण गर्न सबै देशले विशेष व्यवस्था गरे पनि कम हुन सकेको छैन। यस्तो अपराध बढ्नुमा आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक कारण छन्। विकसित मुलुकमा प्रायः यस्ता
राष्ट्रप्रमुखबाट घोषणा गराइएका नीति तथा कार्यक्रम पूरा गर्ने संस्कारको मात्र विकास गर्ने हो भने सरकारप्रतिको जनविश्वास बढ्छ। राज्यका हरेक जिम्मेवार संस्थाहरूप्रति नागरिकको विश्वास कत्तिको छ भन्ने विषयलाई सुशासनको महत्त्वपूर्ण सूचक मानिन्छ। ती संस्थाप्रति जनताको विश्वास नै सुशासनको प्रमुख आधार हो। सरकार स्थायी हुने/नहुने भन्ने पनि जनविश्वासमै भर पर्छ। जनविश्वास आर्जन कार्यसम्पादनबाट गर्ने हो। सेवाग्राहीलाई चित्तबुझ्दो